Ulefone Gemini Review | Smartphone miaraka amina fakan-tsary sy alimo roa miaraka amin'ny € 117 | Androidsis
Fanadihadiana Ulefone Gemini, smartphone amin'ny fakantsary roa miaraka amin'ny vidiny lafo
Miguel Gaton | | hevitra, Ulefone
Ity indray mitoraka ity mandinika ny Ulefone Gemini izahay, terminal iray izay filokana lehibe azon'ny mpanamboatra Ulefone amin'ity taona 2017 ity ary araka ny efa azonay porofoina dia hanome ady be amin'ity sehatra ity. Ny Gemini dia finday avo lenta iray izay amin'ny 117 € fotsiny manolotra anao famolavolana kalitao tsara, vatana aluminium y fakan-tsary roa izany dia manome valiny lehibe indrindra raha ny momba ny fiparitahan'ny fiaramanidina faharoa.
1 Tsara endrika sy vatana vy
2 Sarimihetsika Ulefone Gemini
3 Ny toetra ara-teknikan'ny Ulefone Gemini
3.1 Takelaka data Ulefone Gemini
4 Fakan-tsary Ulefone Gemini
5 Batterie, lanja ary refy an'ny Ulefone Gemini
8 Vidiny ary aiza no hividianana ny Ulefone Gemini
9 Ulefone Gemini Photo Gallery
Tsara endrika sy vatana vy
Araka ny nambarantsika tao amin'ny fampidirana ny lahatsoratra, ny famolavolana ny Ulefone Gemini dia iray amin'ireo tanjany. Ny vatany dia vita amin'ny aliminioma, izay mampita fahatsapana kalitao amin'ny fikasihana ary ny famaranana borosy miaraka amin'ireo sisiny boribory ireo dia manintona ny valiny farany.
Amin'ny ilany ankavanana dia ampidiriny ny slot ho an'ny karatra SIM sy a bokotra hitsin-dàlana fakan-tsary izay miasa tena tsara ary miasa ho toy ny shutter. Eo amin'ny ilany havia dia hitantsika ireo bokotra nentim-paharazana, ilay eo amin'ny sy ivelan'ny fitaovana ary ny fanaraha-maso ny feony. Ny bokotra rehetra koa dia vita amin'ny aliminioma ary miasa tsara ary manana fahatsapana mikasika tsara.
Ny tapany ambony dia misy ihany ny output jack mini raha ny ambany kosa dia manana ny bokotra an-trano izay miasa ho mpamaky ny dian-tànana, ny microUSB karazana C ary ny fivoahan'ny mpandahateny finday avo lenta.
Ny terminal dia misy amin'ny loko telo (volondavenona, volamena ary mainty) samy kanto avokoa izy rehetra ary misy tsiro tsara.
Sarimihetsika Ulefone Gemini
Ny efijery an'ny Ulefone Gemini dia 5,5 santimetatra miaraka amin'ny famaha FullHD ary ny hamafin'ny 401 teboka isaky ny santimetatra izay novokarin'i Sharp. Izany dia Fiarovana Corning Gorilla Glass 3 ary ny arched 2.5D mahazatra izay tena tsara amin'ny finday.
Ny bokotra tokana eo anoloana dia ny bokotra HOME / mpamaky ny rantsan-tànana, noho izany dia tsy manana ny bokotra mpanampy izay matetika hita ao amin'ny fantsona maro. Resaka tsiro ity, misy ny olona maniry ny bokotra mpanampy azo tsapaina ary ny hafa tia azy ireo tafiditra ao anaty efijery, tiako manokana izy ireo tafiditra ao anatin'ny nitondran'ny Gemini azy ireo.
Ny toetra ara-teknikan'ny Ulefone Gemini
Ny Ulefone Gemini dia mampiditra processeur Mediatek MTK6737 de quad core amin'ny 1.5GHz tafiditra ao amin'ny GPU izany ARM Mali-T720 MP2. Amin'ny haavon'ny memo RAM sy ROM dia misy izany 3GB an'ny LPDDR3 RAM ary ROM fitadidiana anatiny an'ny 32 GB.
Amin'ny haavon'ireo angona ireo dia toa somary ara-drariny ny fitadidiana ROM raha ampitahaina amin'ny endri-javatra finday smartphone, na dia marina aza fa azonao atao ny manitatra hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra microSD.
Ity terminal ity dia tena mety amin'ny fampiasana ara-dalàna (Internet, tambajotra sosialy, sary, mailaka, lalao maivana), fa tsy tokony hasaina hihazakazaka lalao mavesatra kokoa izay mazàna mitaky hery fanodinana bebe kokoa. Gemeni ny tenany dia manana zoky lahy izay mitondra ny anarana hoe Ulefone Gemini Pro Natao ho an'ireo mpampiasa mila fampisehoana ambony kokoa izy io.
Ny rafitra fiasan'ny orinasa dia Android 6.0 Marshmallow.
Takelaka data Ulefone Gemini
Marika sy maodely
lafiny X X 15.40 7.68 0.91 sm
loko "Mainty grey Golden "
Tarika 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Tarika 3G WCDMA 900 / 2100MHz
Tarika 4G FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600MHz
Karazana SIM Micro SIM
Teknolojia mampiseho «Efijery LTPS an'ny 5 5 santimetatra miaraka amin'ny fiarovana sy famahana Corning Gorilla Glass 3 amin'ny 1920 x 1080 teboka (401ppp). Multitouch Technology »
Unité centrale Hafainganana MTK6737 Quad Core 1.5 GHz
Fahatsiarovana RAM 3GB LPDDR3
Fahatsiarovana ROM 32GB
Slot SD microSD hatramin'ny 256GB
Operating System Android 6.0 avy ao anaty boaty
Fakan-tsary Rear «Fakan-tsary miisa 13 MP + 5.0 MP misy vokany Bokeh Fandraisana an-tsary mikasika ny fifantohana Tselatra LED sy ny autofocus. »
Fakan-tsary eo aloha 5 MP (Interpolatable hatramin'ny 8MP amin'ny alàlan'ny rindrambaiko)
bateria 3250 mAh tsy azo esorina
seranan-tsambo «Micro USB karazana C mini jack 3 5mm »
NFC Tsy misy
Fampahalalana hafa «Scanner an'ny tanan-tànana gravity sensor kompà "
Votoatin'ny boaty «1 x Ulefone Gemini 1 x USB Cable 1 x adaptatera mahery 1 x Manual 1 x Raharaha »
fiteny Hita amin'ny Espaniola
Fakan-tsary Ulefone Gemini
Ary ankehitriny izahay dia mandeha miaraka amin'ny tanjaky ny Ulefone Gemini, izany fakan-tsary roa aoriana noforonin'i Fakantsary 2 nalamina manokana fa niara-niasa ho toy ny fakantsary tokana mba hanaparitahana ny ampahany amin'ilay sary (mazàna ny ao aoriany) amin'ny alàlan'ny solomaso hanasongadinana ireo zavatra sy olona eo alohan'izay, mamela ny sary be kanto ary misy valiny manaitra tokoa. Mikasika ireo fakantsary roa ireo, ny lehibe dia manana vahaolana 13MP raha ny lisea kosa dia 5MP.
Ao amin'ny horonan-tsary teo aloha dia afaka mahita ohatra iray ianao amin'ny karazana sary azontsika raisina miaraka amin'ity vokatra ity izay fantatra amin'ny anarana hoe Vokany Bokeh.
Ny fakan-tsary voalohany ho an'ny anjarany dia manana famahana 5MP azo ahitatra hatramin'ny 8MP amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, izay tsy ratsy koa.
Batterie, lanja ary refy an'ny Ulefone Gemini
Ity smartphone ity dia mampiditra bateria tsy azo esorina ao anaty 3250mAh maharitra hatramin'ny iray andro eo ambanin'ny fampiasana mahazatra.
Ny refy dia X X 15.40 7.68 0.91 sm ary milanja manodidina Gramin'ny 185. Tsy isalasalana fa tsy miatrika iray amin'ireo terminal maivana indrindra eny an-tsena isika, saingy noho ny fizarana tsara ny lanjany, mahafinaritra ny fahatsapana fa manana ny terminal eo am-pelatanany.
Tsara endrika miaraka amin'ny vatana vy
Memory ROM ambany
Aoriana somary maloto
Vidiny ary aiza no hividianana ny Ulefone Gemini
Ny vidin'ny Ulefone Gemini dia € 117 ary Azonao atao ny mividy azy io miaraka amin'ny antoka rehetra amin'ny fipihana eto. Io dia terminal an'ny mid-range izay misy vidiny mirary tokoa Manolotra antsika fiasa mahaliana sasany ho an'ireo mpampiasa izay tsy mila milalao ny lalao farany. Raha mampiasa smartphone ianao hivezivezy amin'ny Internet, mamaky sy manoratra mailaka, mampiasa tamba-jotra sosialy ary mitantana fampiharana izay tsy dia mitaky be loatra avy eo safidy mividy tsara izany. Tena tsara tarehy ny endriny, vita amin'ny vy izy io ary manolotra anao ny iray amin'ireo fakantsary roa tsara indrindra izay notsapainay teo afovoany.
Ulefone Gemini Photo Gallery
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fanadihadiana Ulefone Gemini, smartphone amin'ny fakantsary roa miaraka amin'ny vidiny lafo
Salama, misy mahalala ve hoe aiza ianao no afaka mividy ny lovia karatra SIM?
Fahatsiarovana vaovao miovaova dia mety hamily ny famoronana finday avo lenta